25 ส.ค. 2561 - 18:56 น.
တရားမျှတရေး လို့ ရိုဟင်ဂျာဘာသာနဲ့ ကြွေးကြော်
၂ဝ၁၇ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် မနက်မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက နယ်ခြားစောင့် ကင်းစခန်းတွေ ကို အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ် ARSA က ဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အစိုးရ စစ်တပ်ရဲ့ ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ရိုဟင်ဂျာတွေ သိန်းချီထွက်ပြေးခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလို ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ဆက်ဘဇားခရိုင် ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက တရားမျှတရေး တရားမျှတရေး လို့ သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့ ကြွေးကြော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က နယ်ခြားစောင့်ကင်းစခန်းတွေကို အာဆာက တိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စစ်တပ်ရဲ့ ရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက မုဒိမ်းမှုတွေ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို သူတို့ အပေါ်ပြုမူခံခဲ့ရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲ အတွင်း ဒုက္ခသည်အများအပြား ငိုကြွေးကြပြီး သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ ဘယ်လို ရက်ရက်စက်စက်ပြုမူခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်သူတဦး ဖြစ်တဲ့ ရှီကူဂါ ဘီဘီက သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘာကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပါတယ်။
၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်က ကျွန်မတို့ကို မြန်မာ အစိုးရ နှိပ်စက်မှုတာတွေက အများကြီးပါ။ အမျိုးသားတွေကို သတ်ဖြတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို မတော်မတရားပြုကျင့်တယ်၊ ကလေးတွေ ကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူး။ အိမ်တွေအားလုံးကို မီးရှို့တယ်။ ဒီလို ရက်စက်မှုတွေကြောင့် မနေနိုင်တော့တဲ့အတွက် သြဂုတ် လ ၂၇ ရက်က စပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါ။ အခု ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မတို့ တရားမျှတမှုကို မရကြသေးပါဘူး၊ ဒါကြောင့် အခုလို ဆန္ဒပြတာပါ... လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေကတော့ ထောင်ချီ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း လိင်ပိုင်းစော်ကားမှု နှိပ်စက်မှု စတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောပြကြပါတယ်။
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် အိုမာ ဆိုတဲ့ ကလေးက မနက်စောစော အိမ်နားလျှောက်သွားနေတုန်း သူ့မိဘ နှစ်ပါး အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆရာ အပြောအရ သူညီအစ်ကို ၃ ယောက် ညီအစ်မ ၂ ယောက် လည်း အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို အိုင်စီစီပို့ဖို့ တိုက်တွန်း
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်း ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိရောက်တယ်လို ပြောဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးတင်ဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတွေကတော့ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာနိုင်ရေး သဘောတူထားကြပြီး ပြန်လက်ခံဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကလည်း ပြန်လည် လက်ခံရေး စခန်းတွေနဲ့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ထိ ပြန်လာတဲ့ သူ မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာခေါင်ဆောင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အာမခံမှ ပြန်လာမယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အာဆာတိုက်ခိုက်မှု နှစ်လည် ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆန္ဒပြ